I-DA-GP38002 yentsimbi ekumgangatho ophezulu ye-2020 yentengiso eshushu
Abathandi bangaphandle bakhetha isitayile sebatch enkulu yokupheka kunye nokupheka; Ngelixa isiciko siphindaphindwe njenge-griddle ye-oval. Sebenzisa le mpheki kwindawo yokupheka yangaphandle ukwenza i-fry fish, inkukhu, amakhonkco anyanisi kunye neefry; okanye usebenzise ukulungisa imbiza enye yokutya kwesityu okanye isilili. Guqula isiciko esandayo kwi-griddle enkulu yebhetshi yesidlo sakusasa, ii-burger, iisendwitshi eziqhotsiweyo kunye ne-fajitas! Ukusetyenziswa kwekhitshi kwisitovu esitshisayo. Nokuba ungaphi na umsitho, ukupheka ngeCast Iron Cookware kuphucula incasa ye-gourmet adventure yakho.
Zininzi izibonelelo zokupheka nge-castware yentsimbi. Esinye sezibonelelo eziphambili zokupheka ngeoyile encinci wakube ufezekisile ukutya okumnandi kwinto yakho yokupheka. Oku kuvumela ukutya okuncinci okunamafutha kunye neoyile encinci ukufezekisa ukuqina okungaphandle okumdaka. Olunye uncedo kukuba xa usebenzisa i-ironware yokupheka i-ironware iya kukomeleza ukutya kwakho ngentsimbi. Ukongeza le yenye yeekhemikhali yasimahla kwezinye iipani ezingezizo ezentambo ezinje ngeTeflon okanye iCeramic.
I-DA-BC13001 i-cookware yentsimbi yentsimbi 2020 intengiso eshushu ephezulu
I-DA-BC37001 2020 intengiso eshushu yokupheka eyenziwe e-china
I-DA-BC13001 yokupheka eyenziwe e-china 2020 eshushu yokuthengisa
Zininzi izibonelelo zokupheka nge-castware yentsimbi. Esinye sezibonelelo eziphambili zokupheka ngeoyile encinci wakube ufezekisile ukutya okumnandi kwinto yakho yokupheka. Oku kuvumela ukutya okuncinci okunamafutha kunye neoyile encinci ukufezekisa ukuqina okungaphandle okumdaka. Olunye uncedo kukuba xa usebenzisa i-ironware yokupheka i-ironware iya kukomeleza ukutya kwakho ngentsimbi. Ukongeza le yenye yeekhemikhali yasimahla kwezinye iipani ezingezizo ezentambo ezinje ngeTeflon okanye iCeramic
I-DA-BC26001 / 32001/32002/37001/37002 i-iron yentsimbi 2020 intengiso eshushu yenziwa etshayina